'म जहाँ भएपनि जहाँ गएपनि, नेपाली हूँ, म 'गैरनेपाली' (एनआरएन) हुन सक्दिन' -छेवाङ शेर्पालामा, अन्तरिम अध्यक्ष, एएनए | usa 'म जहाँ भएपनि जहाँ गएपनि, नेपाली हूँ, म 'गैरनेपाली' (एनआरएन) हुन सक्दिन' -छेवाङ शेर्पालामा, अन्तरिम अध्यक्ष, एएनए | usa
Content View Hits : 35822892
Written by Tsewang Sherpalama, Interim President, ANA
Exclusive:4photos: न्यू योर्क- नेपालले मलाई जन्मायो, हुर्कायो र मेरो चिनारी पनि नेपालले नै दियो- पहिलो चिनारी 'नेपाली' र दोश्रो चिनारी 'शेर्पा' भनेर । मेरो शरीर नेपालको माटोले, मेरो आत्म नेपालको हावाले र मेरो रगत नेपालको पानीले बनेको छ। अनि, म आफुलाई किन भनु 'गैरनेपाली' यानेकी 'एनआरएन' ? म नेपाली हुनमा शौभाग्यशाली ठान्द छु । अहँ, म त नेपालीबाहेक अरु कुनै हुनै चाहँदिन यो जन्ममा । म 'गैरनेपाली' (एनआरएन) हैन, म नेपाली हूँ, शेर्पा हूँ । मैले अन्य कुनै मुलुकको नागरिक हुनै चाहिन, म नेपालको नागरिक मात्र भएर बाँच्न चाहन्छु- यो जन्ममा । त्यसैले म जहाँ भएपनि जहाँ गएपनि नेपाली हूँ ।
I amaNepali, Not NRN (Non-Resident Nepali): Tsewang Sherpa, Interim president, The Association of Nepalis in the Americas (ANA). Photos by Pratha Magar for USNepalOnline
मलाई नेपाली हुनमा तेति नै गर्व छ, जति गर्व गुरु दलाइ लामालाई तिब्बेतियन हुनुमा छ, जति गर्व गान्धीजिलाई इन्डियन हुनुमा थियो, मण्डेलालाई अफ्रिकन हुनुमा थियो, चर्चिललाई ब्रिटिश हुनुमा थियो र केनेडीलाई अमेरिकन हुनुमा थियो ।
सन् १९८२ मा मातृभूमि फर्किनेक्रममा अमेरिका घुम्न आईयो । १९८३ मा अमेरिकन Permanent Resident Card अथवा 'ग्रिन कार्ड' (Green Card) पनि मिल्यो- त्यो पनि नेपाली-शेर्पा भएकै आधारमा । त्यसपछि १९८७ मा अमेरिकन नागरिक हुने अवसरको ढोका पनि खुल्यो । त्यो अबसरसंगै अमेरिकन सिटिजन भए फाइदा हुन्छ, अमेरिकाबाट खेदिदैन, मत दिन सकिन्छ, अमेरिकन रास्ट्रिय उच्च-सरकारी जागिर पाइन्छ, परिवार, नाता-कुटुम्ब अमेरिका झिकाउन पाइन्छ आदि इत्यादि थुप्रै लोभ लाग्ने कुराहरु सुझाब र सल्लाह पनि आयो- कानुनविद, सुभचिन्तक र परिवारका सदस्यहरुबाट तर आफ़ुलाई भने अमेरिकन त के, इन्द्र्लोकको नागरिक हुने पनि कहिल्यै चाहना भएन । आवश्यकता पनि देखिएन र आजसम्म भएको पनि छुईन । मलाई नेपालले सबै सहुलियत र अधिकार दिएको छ जुन आमनेपाली हुँदा पाईन्छ । अमेरिकाले पनि आफ्नो योग्यत्ताअनुसारको अवसर दिएकै छ, प्रकियगत बिधी पुर्‍याएर परिवार पनि झिकाएकै छु । मुलुकको कानुन तोड्ने तथा अन्य अपराधी क्रियकलाप नगरेपछि देश निकालामा पनि परेको छुईन । अमेरिकामा आउँदा 'वेलकम टु अमेरिका' र नेपालमा जाँदा 'वेलकम टु नेपाल' पनि पाएकै छु ।
Tsewang Sherpa, Interim president, The Association of Nepalis in the Americas (ANA) at ANA 31st New York Convention on July 4, 2013. Photos by Pratha Magar for USNepalOnline
प्रसंग हो, एनआरएन र 'दोहोरो नागरिकता' अथवा Duel citizenship को 'एक पल्टको नेपाली सधैकोलागि नेपाली' भन्ने नाराको । एनआरएन 'समाजसेवी' नेताहरुले यो मन्त्र जप्न थालेको पनि करिब १५ बर्ष भै सक्यो । तर अचम्म लाग्ने कुरो के छ भने, कसले, कहिले र कहाँ भनेको छ 'एक पल्टको नेपाली सधैकोलागि नेपाली' हैन भनेर ? विदेशिने नेपालीलाइ नेपाल सरकारले बिदेशी भनेको छ र ? नागरिकता वा राहदानी थुतेको छ र ? यदि छैन भने, यो मन्त्र जप्नुको स्वार्थ के छ ? सायद हाम्रा 'समाजसेवी' एनआरएन मित्रहरुलाई 'नागरिकता बन्चित र परिबर्तन गर्न कसैले कसैलाई दबाब दिन सकिने छैन' भन्ने संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणापत्र छ भनेर स्मरण गराउनु पर्छ कि? अझ अमेरिकाको कुरो गर्ने हो भने त हाम्रो माग उसले पुरा गरिदिएको छ। अमेरिकाले उपलब्ध गराउने ग्रिन कार्ड वा राहदानीमा नै जन्मेको देश भनेर रातो अक्षरले स्पस्ट देखिने गरि उल्लेख गरिन्छ । अनि भएन एक पटकको नेपाली सधैको नेपाली ? व्यक्तिगत आवश्यकता, सुबिधा, फाइदा र स्वार्थको निमित्त सौतेली आमाको छोराछोरी हुने, अनि पारिवारिक अंश र अन्य अधिकार चाही आफ्नो आमासंग माग्ने ? त्यो पनि ठुलो स्वरले ! सायद मैले पो कुरो नबुझेको हो कि? हैन भने किन चाहियो नेपालीलाई 'दोहोरो नागरिकता' ? सर्बसाधरण नेपालीलाई चाहिंदै नचाहिने बिषयलाई हिमाल भनाएर भाषण गर्दै नेत्रित्व हत्याउनु 'गैरनेपाली' एनआरएन नेताहरुको गैरचरित्र पो हो कि ?
एनआरएनलाई नेपालमा 'लगानी' (Investment) गर्न 'एक कर' (Single Taxation) को सुबिधा र हक-अधिकारकोलागि 'दोहोरो नागरिकता' चाहियो भनेको पनि सुनिन्छ। दोहोरो नागरिकता हुने बित्तिकै बसेको देशले मेरो देशको पैसा निस्फिक्री भएर जहाँ लैजान मन लाग्छ लैजाउ भन्छ र ? जसले विदेशको नागरिकता लिएको छ उसले यतै परिवार बोलाएर २५/३० बर्षे ऋणमा घर किनेको हुन्छ र यहि ऋण तिर्दैमा जीवनले बिस्राम लिन्छ अनि कसरी लैजान सक्छ सम्पति नेपालमा ? अधिकांश प्रबासी नेपालीहरुको अवस्था हो यो।
हामी प्रवासी नेपालीहरु जीवनपर्यन्त नेपाली त हौं नै। यो अधिकार कसैले खोसेर लिन सक्दैन। यो जन्मसिद्ध अधिकारको कुरा हो। हाम्रा एनआरएन नेताहरु बरु प्रवासमा रहँदा नेपालीहरुले के कस्ता दु:ख झेल्नु पर्दो रहेछ र त्यसको निवारण गर्न के कस्ता कार्यक्रमहरु अगाडि सार्नु पर्दछ भनेर घोत्लिन सके र त्यसलाई कार्यान्बयन गर्नतिर लागे हामी सबैको भलो हुने थियो।
Note: लेखक 'दि एशोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिकाज (एएनए)' का वर्तमान अन्तरिम अध्यक्ष हुन्।